Ahoana no mety ho fiantraikan'ny rindran-kiady PR6 eo amin'ny tranokalanao SEO?
Ny rehetra dia mahafantatra fa ny loharano tsara indrindra amin'ny fananganana rohy mifandray amina rohy dia domains PageRank. Manompo izy ireo mba hanatsarana ny soso-kevitra momba ny fikarohana ary hamindra ny toerana misy anao ao amin'ny pejy valin'ny fikarohana.
Alohan'ny hanombohana hamorona profil-rohy, mila mikaroka sy mandinika momba ny PR6, PR7, ary ireo tranonkalan'ny fikarohana hafa ianao. PageRank dia singa manan-danja iray izay maneho ny fahefan'ny tranonkala. Izy io dia manavaka ny maha-zava-dehibe ny pejy web amin'ny alàlan'ny fanisana ny isa sy ny kalitaon'ny rohy izay manondro azy. Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia rafitra fanamafisana sarobidy natombok'i Google mba hametrahana ireo tranonkala ao amin'ny tranonkala - editeur logiciel rh. Ny PageRank minitra dia zero ary ny iray dia iray isa folo. Amin'izao androntsika izao, PageRank dia tsy mendrika ny famandrihana fahombiazan'ny vohikala. Tsy manome antoka ny fikarohana lalao avo kokoa, na ny fitomboan'ny fifamoivoizana.
Na dia izany aza, ny fahazoana bakalorea avy amin'ny tranokalan'ny PR dia mbola ilaina amin'ny fampivoarana ny fanatsarana ny rohin-tranonao. Ny Google dia manome loka afa-tsy loharanom-baovao mendri-piderana sy efa ela efa misy PageRank. Izany no mahatonga ny famoronana rindran-damina any amin'i Google momba ny votoatiny. Raha toa ka misy rakitsary mifandraika amin'ny rohy PR6 - PR10 ianao, dia hihaona amin'ny Google TOP ianao.
Teknika hahazoana mivadika PR6
Fanamboarana backlinks ny mpifaninana
tsy iray monja amin'ny webmaster ao amin'ny nichanao izay te-hamorona profil fifandraisana tsara. Ny ankamaroan'ny loharanon'ny tranonkala TOP ao amin'ny fonosanao dia manana fanentanana fananganana rohy matanjaka ary mikaroka hatrany ny fahafahana manangana fifandraisana vaovao. Minoa fa na tsia, afaka mahazo tombontsoa amin'ny rindrankajy mpifaninana ianao. Izy ireo dia nanao ny asa fanorenana rehetra ho anao. Noho izany, ny zavatra rehetra ilainao dia ny fifandraisana mbola misy mpifaninana miaraka amin'ny rafitra RLR.
Mila manao fikarohana amin'ny fifaninanana ianao ary mamantatra ny fomba hanorenanao rohy ireo mpifaninana aminao. Ary farany, mila mamerina na mampindrana fotsiny ny paikadiny ianao. Azonao atao ny mifandray amin'ireo loharano izay namoronan'ny mpifaninana aminao ny rohy ary manontany momba ny rohy fananganana tranokala ho an'ny sehatra misy anao.
Ny fanamafisana ny toetr'andro
Azo inoana fa efa nandre momba ity teknika fananganana rindrambaiko ity nampidirin'ny manam-pahaizana SEO Brian Dean. Tsotra izany, fa manome vohikala amin'ny vokatra tsara.
Voalohany indrindra, mila manao fikarohana momba ny fambolena ianao ary mahita lahatsoratra na lahatsoratra malaza na lahatsoratra mifandray amina lahatsoratra.Avy eo ianao dia mila mamorona ny sangan'asanao matihanina amin'ny fitaovana novakianao. Na izany aza, mila misoroka ny fametahana kopia ianao raha hilalao aminao izy. Tokony hamorona lahatsoratra iray manokana ianao mifototra amin'ny fikarohana nataonao. Avy eo, mila mametraka rohy mankany amin'ny lahatsoratra efa misy lahatsoratra ianao mba hahazoana antoka fa afaka mampifandray amin'ny tranokalanao vaovao vaovao ny mpampiasa.
Ity rafitra fananganana rohy ity dia mitovy amin'ny teo aloha. Na izany aza dia misy fahasamihafana goavana. Manao izay tsara indrindra ho an'ireo izay efa manana ny votoatiny izay mila asongadina. Amin'ity tranga ity, mila miankina amin'ny trano fidiovana maromaro ianao. Ity teknika ity dia manome fahafahana anao hahita tranga misy tranonkala hafa mifototra amin'ny lohahevitra mitovy amin'ny anao izay manana rohy maro manondro azy ireo.